#GeospatialByDefault - 2019 Forum Geospatial Forum - Geofumadas
#GeospatialByDefault - 2019 Forum Geospatial Forum
2, 3 iyo 4 ee bisha Abriil ee sanadkaan, kooxda ugu weyn ee tiknoolijiyada casriga ahi waxay ku kulmi doonaan Amsterdam. Waxaan tixraac in ay dhacdo caalami ah in meel maalmood 3, ayaa lagu qabtay sannadihii la soo dhaafay, loo yaqaan Geospatial World Forum 2019, madal wada halkaas oo madaxda duurka geospatial soo bandhigay tabo cusub ugu dambeeyay ee qaab dhismeedka of the-Geo injineernimada, iyo codsigeeda iyada oo loo marayo sempatiums, workshops, seminar ama seminaaro. Ka qaybqaadashadu waa mid muhiim ah, ugu yaraan xirfadlayaasha 1500 iyo ururada 500 ayaa u heellan doona horumarinta dhacdadan.
Sannad kasta waxay diiradda saaraan mawduuc gaar ah, sannadkii hore waxa uu ahaa GEO4IR: Kobcinta warshad dhaqameedka afaraad, oo sanadkaan ku daraya hashtag, mawduuca ugu muhiimsan waa #geospatialbydefault - Xoojinta balaayadaha!
Ajandaha wuxuu wax ka qabtaa barnaamijyada 8, mid kasta oo la xidhiidha unug, jimicsi, wadashaqeyn ama codsigooda gudaha dhabta ah, waxaa lagu magacaabaa hoos:
Geo4SDGs: Wax ka qabashada Agenda 2030
Suuq-geynta iyo Dimuquraadiyeynta Kormeerka Dunida, Suuq-geynta iyo dimuqraadiyeynta ilaalinta Earth.
Cities smart Magaalooyin fudud
Analytics Goobta iyo Sirdoonka Ganacsiga, Falanqaynta goobta iyo sirdoonka ganacsiga
Shirarka Sayniska Warbixinta - Soodhiga sayniska xogta
Dhismaha iyo injineernimada - Dhismaha iyo injineernimada
Qalabka farsamada - Qalabka farsamada
Mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadaa waxaa ku jira hawlo badan; tusaale ahaan, la daad gureyn doono qolalka -plenarias- bandhiga ugu weyn, mid ka mid ah hawlaha ugu filayo waayo, ka qaybgale oo ka qaybgalayaasha, sida ay waxaa looga hadli doonaa wakiillo oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee horumarka geospatial iyo sidoo kale shakhsiyaad siyaasadeed iyo warshadaha
Nashaadkan waxaa lagu magacaabaa "Hoggaaminta fikradda iyo kaqaybgalka siyaasadda - PTababarka Hoggaanka iyo Siyaasadda Siyaasadeed, wuxuuna ka kooban yahay Xannaannada 3: Gudiga Warshadaha, Guddiga Sare ee Xisaabeedka iyo Ururka Horumarinta iyo Guddiga Wasaaradda. - AI, Big Data, internetka tabo cusub, gaashaanbuur iyo saadaasha duurka ku geospatial, falalka ah ilaalinta iyo soo saarista khayraadka dabiiciga ah, kacaanka afaraad warshadaha hogaaminayo sirdoonka macmal: mowduucyo guddi kuwaas soo bandhigay waxyaabaha IoT iyo robotics.
Qaar ka mid ah bandhig u noqon doonaa is-dhexgal ku xiran joogo technology ama element ah, iyo ku hadla waxaa lagu xusay kartaa: Jack Dangermond - Madaxweynaha ESRI iyo xubin ka mid ah Golaha Adduunka ee Geospatial Warshadaha, Ola Rollen - Madaxweynaha iyo CEO of geesle, Steve Berguld - Presidete iyo CEO of Trimble USA, Kwaku Asomah-Chermeh - Wasiirka dalalkan iyo khayraadka dabiiciga ah - Ghana, ama Paloma Gomez Merodio - Madaxweyne ku-xigeenka ee INEGI Mexico.
Barnaamijka ugu horeeya wuxuu xaq u leeyahay Geo4SDGs: Wax ka qabashada Agenda 2030, Mawduucyada xiriirka ka dhaxeeya isdhexgalka tiknoolajiyada, injineernimada, bulshada iyo dayactirka deegaanka ayaa looga doodi doonaa. Tilmaamaya habkan, jiritaanka geeddi-socodka iyo geotechniyada ee u oggolaanaya in la qorsheeyo, qorsheeyo laguna abuuro qaab-dhismeed iyo kaabayaal macno ahaan - u roonaanta bey'adda-, bulsho ahaan mas'uulka ka ah iyo dhaqaale. Ka mid ah mawduucyada uu ka samaysan yahay barnaamijkan waxaa ka mid ah: isku xirta dadka, meeraha iyo barwaaqo, iyada oo aan ollogga malmaha tilmaamayaasha gashto (SDG) iyo la socodka qaabka awoodsiinta juqraafi: awoodaha siyaasadda caalamka Macluumaadka Qaran iyo Weyn iyo Falanqeyn loogu talagalay Horumar waarta.
In Geo4SDG ah, aqoonyahanno, madaxda ganacsiga, xubnaha iyo siyaasadda ammaanka, kuwaas oo soo bandhigi doonaa muhiimadda ay leedahay isticmaalka iyo horumarinta xogta aan ollogga waayo, go'aan qaadashada, siyaasadda, bulshada, dhaqaalaha iyo farsamada heerka bulshada loo soo bandhigi doono. Sidoo kale, waxay ku muujin doonaan sida xogta juquraafiyadu u metelayso qalab aan loo baahnayn oo loogu talagalay kormeerka iyo qiyaasidda dhacdooyinka, dhacdooyinka ama masiibooyinka dabiiciga ah. Qaar ka mid ah ku hadla ee arrintan waa: Dean Angelides - Head Corporate gaashaanbuuraysiga caalamiga ESRI, Stephen Coulson - Madaxa Xafiiska ESA Sustainable Initiatives iyo Prof. Chen Jun - Saynisyahan Xarunta Qaranka Geomatics of China.
Barnaamijka labaad Suuq-geynta iyo Dimuquraadiyeynta Kormeerka Caalamka - Suuq-geynta iyo dimuqraadiyeynta ilaalinta Earth, barnaamijkan, bandhigayaashu waxay soo bandhigi doonaan kobcinta farsamada iyo dhaqaalaha ee alaabooyinka, codsiyada iyo hababka indha-indheynta dhulka. Intaas waxaa dheer, tan korniinkaan, waxay tilmaamaysaa isticmaalka badan ee tiknoolajiyadaan la socoshada dhulka sannadaha badan, taas oo tarjumaysa helitaanka xogta baaxadda leh, iyo dookha user ee saarista iyo filitaanka ku saabsan tiknoolajiyada cusub si loo horumariyo.
Qof kasta oo haysta fursad waa inuu yimaadaa dhacdadan. Marar dhif ah waxaan ku helnaa qashinka aqoonta khabiirada beerta, bandhigyada soo saarayaasha iyo caymiska warbaahinta caalamka kuwaas oo wadajir u ah ka qaybgalayaasha muhiimadda ah in geospatial uu soo galo warshadaha kala duwan ee injineernimada.
Ka mid ah jilayaasha ka mas'uulka ah horumarinta barnaamijka waxaa lagu sheegi karaa:
Richard Blain Founder iyo CEO of
Earth-i - Boqortooyada Ingiriiska,
Agnieszka Lukaszczyk Agaasimaha Sare ee Qorshaha Arrimaha Midowga Yurub - Belgium,
Agaasimaha Alexis Hannah Smith iyo aasaasaha IMGeospatial United Kingdom,
Jean-Michel Darroy Madaxweyne kuxigeenka, Madaxa Iskaashiga Iskaashiga Isbahaysiga Istaraatiijiga ah, Airbus Defense & Space
Dhammaantood, oo ay weheliyaan ka qaybgalayaasha kale, waxay ka sheekeyn doonaan: mustaqbalka indha-indheynta dhulka, dimoqraadiyada xogta ilaalada goobaha ama siyaasadaha iyo istaraatiijiyadaha horumarinta goobaha kormeerka goobaha.
Dhinaca kale, dad badan ayaa xiiseynaya barnaamijka saddexaad Cities smart, kaas oo ku dhacay sannadihii la soo dhaafay. Tani waxay ka hadli doontaa arrimaha sida: isdhexgalka sirdoonka caanaha ah ee magaalada si loo hagaajiyo howlgalada, kaabayaasha isku xiran ee dhaqdhaqaaqa caqliga, tamarta magaalada, maamulka xaglaha ah iyo qorsheynta magaalada caanka ah ama qaabka macluumaadka magaalooyinka.
Waa in la sidoo kale xusay in ku hadla wuxuu ku siin doonaa aragti iyo dood ku saabsan khayraadka farsamada loo baahan yahay in la aasaaso magaalo smart, sida shabakadaha shidma, kamaradaha, qalab wireless iyo la xidhiidha IoT ah. Laakiin ma aha oo keliya, laakiin sidoo kale sida isdhexgalka tiknoolajiyada muwaadiniinta iyo habka helitaanka xogta waxay gacan ka geystaan ​​sidii magaalooyinku u qabsoomi lahaayeen waxtarkooda, tan oo dhan iyada oo loo marayo qaabka falanqaynta ee xirfadlayaasha la tababaray, khabiirada mawduuca Falanqaynta qiyaasta, socodka iyo teknoolajiyada.
Waxaa ka mid ah ka qaybgalayaashu ay kala yihiin: Ted Lamboo Madaxweyne ku xigeenka sare ee Systems Bentley, Jose Antonio Ondiviela - Agaasimaha xal Microsoft ee Spain, Isuduwaha Jette Vindum- Smar City ee degmada Vejle. Denmark, Reinhard Blasi - Sarkaalka Horumarinta Suuqa ee Wakaalada Yurub GNSS iyo Agaasimaha Sare ee Oracle USA.
Kooxda saddexaad waxay ku saabsan tahay Geo4Enviroment - Geo jawiga, iyada oo loo marayo bandhigayaasheeda waxay fariin ka bixin doontaa sida isticmaalka aaladaha geospatial ah, ay soo ururin karaan oo lafaguraan diimeedyada ka mid ah nidaamka deegaanka. Waxa ugu weyn ee diiradda saaraya waxa ka mid ah ka qaybgalka geotechnology ee xalka dhibaatooyinka deegaanka ee ugu muhiimsan. Mawduucyada ka kooban barnaamijkan waa inta badan saddexda: Iskaashiga xudduudaha ah ee ka dhanka ah denbiyada deegaanka, Dib u dhiska musiibada ka dib: soo kabashada iyo sii waaraajinta iyo xalalka geospatial ee isbeddelka cimilada: miyaanu ku filaneynaa in aan wax qabanay?
Bandhige kuwaas oo kooxdan ka samaysan, in la xuso dhowr iyaga ka mid yihiin: Ana Isabel Moreno Economist, Center for Ganacsi, SMEs, gobollada iyo magaalooyinka -France OECD, Dr. Andrew Lemieux Isuduwaha Institute of Dambiyada Against Institute for Duur Daraasadda Dambiyada iyo Law (NSCR), tababare Davyth Stewart Global Dhirta iyo wasakhowga hawada Enforcement - INTERPOL France, Kuo-Yu Chuang gacankudhiiglaha CEO iyo shaqan Geothings-Taiwan, Stefan Jensen Head of Group Maamul Data - Hay'adda deegaanka Yurub, Denmark.
Muhiimadda dhacdo sidan oo kale ah ayaa ah in dhammaan dadaal shaqsiyadeed iyo kuwo wadajir ah ay muuqdaan, si loo dhiso xalal farsamo kuwaas oo tixgelinaya isdhexgalka dadka bani-aadmiga ah, taas oo ugu dambeyntii u tarjunto jawi wanaagsan oo wanaagsan . Sidoo kale, waxay ka dhigtaa meel bannaan oo lagu falanqeynayo, halkaas oo ay ka muuqato iyada oo loo marayo ka qaybgalka tacliinta, ardayda, dadka isticmaala (oo ka soo jeeda qaybaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay), iyo alaab-qeybiyeyaasha, muhiimada dalabka boosaska iyo teknoolajiyada - in koritaanka dhaqaalaha adduunka iyo ilaalinta deegaanka.
Barnaamijyada kale, ee muhiimadda la mid ah kuwa kor ku xusan, sida Analytics Goobta iyo Sirdoonka Ganacsiga, Falanqaynta goobta iyo sirdoonka ganacsiga, Maalinta Bilowga, Shirarka Sayniska Warbixinta - Shirarka sayniska ee sayniska, Dhismaha iyo injineernimada - Dhismaha iyo injineernimada, wuxuu abuuraa arrimo balaaran oo loogu talagalay horumarka joogtada ah ee juquraafi ahaaneed. Sidaa darteed, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ka qeyb qaadato dhacdadan aduunka ee weyn.
Post Previous«Previous Waa maxay sababta loo isticmaalo laba mataano ah dhismaha
Post Next Abaalmarinta 2019 Geospatial World Leadership ayaa lagu dhawaaqay, waxaana lagu bixin doonaa GWFNext »